Nhau - Matipi gumi ekuchengetedza zvakakwana kwekutakura
Wheel Hub unit inobereka
Taper chinotenderera inobereka
Matipi gumi ekuchengetedza zvakakwana kwekutakura
Chii chakafanana, wachi, skateboards nemuchina wemaindasitiri zvakafanana? Ivo vese vanovimba nemabhegi kuchengetedza kwavo kutenderera kutenderera kufamba. Nekudaro, kuti vawane kuvimbika, vanofanirwa kuchengetedzwa nekubatwa nemazvo. Izvi zvichaita kuti hupenyu hurefu hutakure hupenyu, zvichidzivirira nyaya dzakawanda dzinowanzoitika dzinogona kukonzera kutadza uye inodhura nguva yekuzorora. Pano Wu Shizheng, maneja maneja wehunyanzvi anotakura mupi, JITO Bearings, anotsanangura gumi emazano epamusoro ekutarisisa kwakaringana.
1. Bata uye chengeta nemazvo
Kuti udzivise kusvibiswa kunosanganisira hunyoro, guruva kana tsvina inopinda mukutakura, inofanirwa kubatwa uye kuchengetwa nemazvo. Kutanga, mabheyari anofanirwa kuchengetwa akatwasuka mumapakeji avo epakutanga munzvimbo yakachena, yakaoma uye tembiricha yemukamuri. Kana mabheyari achibatwa zvisina kufanira, semuenzaniso, kana machira avo akabviswa nguva isati yakwana, izvi zvinogona kuvaratidza kune ngura kana kusvibiswa. Mabheyaringi zvinhu zvisina kusimba uye zvinofanirwa kurapwa zvine hungwaru. Saka nekudaro, izvo zvinhu zvakadonhedzwa hazvifanirwe kushandiswa sezvo izvi zvinogona kukonzera kukundikana nguva isati yakwana.
2. Shandisa maturusi ehunyanzvi
Kuwedzera, zvishandiso zvakakodzera zvinofanirwa kushandiswa pakubata mabheyari. Zvishandiso zvisina kunyatso shandiswa panguva yekukwirisa uye kubvongodza maitiro zvinogona kukonzera kukuvara kusiri madikanwa, kubvarura mazino uye kupfeka. Kutakura pullers kana induction heater semuenzaniso, zvakagadzirirwa chaizvo mabhegi.
3. Tarisa imba inobereka uye shaft
Wongorora mamiriro epanyama edzimba uye shaft usati waisa kubereka. Shandisa jira nyoro kupukuta nzvimbo dzakachena, usati wazviziva iwe nenzira chaiyo yekumisikidza.
4. Gomo nenzira kwayo
Iwe unofanirwa kushandisa nzira kwayo kana uchisimudza mabheyari ako uye izvi zvinowirirana zvichienderana nerudzi rwekutakura uye mhando yekukwana. Radial bhora rinotakura mhete rinogona kuiswa neakasiyana mafits kubva kutsvedza inokodzera kusvika kune yakasimba yekutsikirira inokodzera, zvinoenderana nerudzi rwemutoro, iyo yekumhanyisa uye vibration mazinga. Kuisa kumanikidza kuringi isiriyo kana yakakodzera kunogona kukonzera kukuvara kwezvinhu zvinopunzika. Saizvozvowo, yakanyanyisa kusununguka kana yakanyanyisa kuomarara inokodzera, kupera kusingagumi pazvigaro zvekutakura kana kunze kwematanda akakomberedza kana dzimba dzinofanirwa kudzivirirwa
5. Tora mafuta ako zvakanaka
Chimwe chezvikonzero zvinotungamira zvekutakura kutadza ndiko kunyorova kwekutadza. Izvi zvinosanganisira kushandisa girisi isiriyo, pamwe nekushandisa mafuta akawandisa kana mashoma. Iyo chaiyo girisi inosarudzwa nekufunga mamiriro ezvakatipoteredza, tembiricha, kumhanya uye mutoro. Nyanzvi inobereka ichakwanisa kuraira pane yakakodzera lubrication machisi uye inogona kudzora inotakura lubrication kune mukati memamirigiramu mashoma. Saka, kana iwe uchida yakaderera, yakajairwa kana yakakwira girisi kuzadza, iwe unenge wakachengeteka mukuziva kuti yako lubrication haizokonzere matambudziko mushure mezasi kwetambo.
6. Dzivisa kudziya kunze kwenzvimbo yekutakura
Kana simbi inotakurika yakapiswa pamusoro peyakatemerwa, izvi zvinogona kushatisa zvachose kana kupfava izvo zvinotakura, zvichikonzera kudzikira kwemutoro wekutakura uye zvichitungamira kukundikana kwemidziyo. Kusarudza kubereka kunoenderana netembiricha yako yekushandisa renji ndiyo nhanho yekutanga. Munguva yekugara uchigadziriswa, tarisa kubuda kwemaringi, zvinhu zvinokungurutswa nemakeji, nekuti izvi zvinogona kuratidza kupisa kukuru. Izvi zvinogona kuve mugumisiro wekunyanyisa kwekushanda tembiricha uye isina kukodzera girisi uye inoda kuti iwe utarise nekukurumidza.
7. Pese pazvinogoneka, dzivirira kuita ngura
Ngura ndiye muvengi wechisikigo wemabhere. Nekufamba kwenguva, kana mabheyari akafumurwa kunyorova, ngura ichaitika. Izvi zvinogona kutungamira kune ngura inopinda munzira uye pakupedzisira, kutakura nguva isati yakwana uye kukundikana kwemidziyo. Kupfeka magirovhosi kuchaona kuti dikita kana zvimwe zvinwiwa hazvipinde mukutakura. Paunenge uchigadzira yakanangana nenzvimbo dzinokanganisa, kusarudza iyo yakatakura kwakakosha. Semuenzaniso, kusarudza 316 simbi isina simbi inotakura nezvisimbiso kazhinji sarudzo yakanaka munzvimbo dzegungwa kana dzemakemikari.
8. Sarudza chinotsiva chako nokungwarira
Kana kubereka kukasvika kumagumo ehupenyu hwayo hwekushanda, chinja kubereka kwako neakafanana kana akakwirira muhunhu kune hwepakutanga. Imwe nzira yemhando yepasi-soro ichave yakanyanya kukundikana uye inogona kutungamira kukundikana kwemidziyo inodhura mukufamba kwenguva.
Kashoma kuti kubereka kunokundikana pasina chero yambiro zviratidzo. Ruzha rwakawandisa kana kuwedzera kwekudengenyeka kana kupisa kunogona kuve chiratidzo chedambudziko rakadzama. Kana bere rinoratidzira chero kusashanda kwekuita, rinofanira kuongororwa zvakanyanya.
10. Shevedzai nyanzvi
Chekupedzisira, kana uchikahadzika, tsvaga rubatsiro kune nyanzvi. Nyanzvi inobereka inokwanisa kukuyambira iwe pane yakanakisa nzira yekugadzirisa kune yako chaiyo kunyorera uye ichakwanisa kukubatsira kuti uongorore chero matambudziko akatakura. Zvinogona kuve zvakapusa sekutumira yako dambudziko mabheyari kune nyanzvi, vanozoongorora nekudzosera mabheyari ako kana zvichidikanwa.
Post nguva: Mar-04-2021
Kero: Nemazvo inobereka maindasitiri paki, Guantao County, Hebei dunhu
Runhare: + 86-635-8550888
Nharembozha: + 86-15865730123